शीत भण्डार निर्माण अनुदानमा करोडौंको चलखेल - EKalopati
शीत भण्डार निर्माण अनुदानमा करोडौंको चलखेल
माघ ७, २०७५
काठमाडौं, माघ । काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएदेखि नै चर्चा र बहको विषय वन्दै आईरहेको छ । नेपाल सरकारकै लगानीमा ल्याएको सो परियोजनामा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता तथा कृषि मन्त्रीहरुले गर्ने गरेको प्रयोगका कारण पनि चर्चामा आएको हो । हुन त अनुदान वितरण गर्ने आयोजनाहरु निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो हिजोको प्याक्ट आयोजना होस् वा साना मझौला कृषक आयस्तर सुधार आयोजना
नै किन नहोस् । सवैमा मामाको धन फुपुको श्राद्ध जस्तै भएको छ । यतिखेर भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उपलब्ध गराउन लागेको १० करोड मूल्य बराबरको शीत भण्डारको चर्चा हुन थालेको छ । आयोजनाले सात प्रदेशका लागि भन्दै १० करोड मूल्यका १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान माग गरेको थियो । सोही बमोजिम २८ वटा कम्पनी तथा संस्थाहरुले शीत भण्डार निर्माणका लागि आशय पत्र समे त पेश गरेका थिए । जसमध्ये आयोजनाले १० वटा कम्पनीलाई मापदण्ड विपरित छनौट गरेको छ । मापदडि विपरित आर्थिक चलखेलका साथ शीत भण्डार निर्माणका लागि संस्था चयन गरेको भन्दै केही संस्थाले कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी समक्ष पुनमूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दै उजुरी समेत हालेका छन् ।
मन्त्री चक्रपाणी र राज्यमन्त्री चौधरी समक्ष पेश गरिएको उजुरीमा आयोजनाका उच्च अधिकारी मन्त्रालयका उच्च अधिकारी समेतको मिलेमतोमा स्थलगत अध्ययन समेत नगरी , शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यविधि विपरित हचुवाका भरमा आर्थिक प्रलोभनमा परी संस्था छनौट गरिएको उल्लखे गरिएको छ ।
आयोजना वितरण गर्न लागेको सो अनुदान कार्यक्रम रद्द गर्ने कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको योजना समेत विफल भएको छ । शीत भण्डार अनुदानमा विवाद आउने भन्दै मन्त्रीले स्थगित गर्ने मौखिक निर्देशन समेत दिएको बताएको छ । तर पछि फेरि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी संस्था छनौट गरिएको हो ।
शुरुमा मन्त्री आफैले नचाहको शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान सहयोगमा किन चुके मन्त्री खनाल ? प्रश्न उब्जिएको छ । १ अर्व रुपैयाँको अनुदानमा करीव १५ करोड रुपैयाँ को खलो फड्को गरिएको आरोप लागेको छ । सो खेलो फड्कोमा स्वयं कृषि मन्त्री नै पछिल्लो समयमा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीले त्यसका लागि स्वकीय सचिव सरोज खनाललाई जिम्मेवारी दिएको श्रोतले दावी गरेको छ । त्यस्तै सचिव डा युवकध्वज जिसीको पनि यसमा सलग्नता रहेको बुझिएको छ । मन्त्रीले जस्र्त सचिवले पनि आफ्नो संलग्नता नदेखियोस् भन्नका लागि आफ्नो सालो कृष्ण जिसीलाई प्रयोग गरिएको बताइएको छ । त्यसै गरी योजना महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र कार्की, आयोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेल, आयोजनामा कार्यरत लेखाका उपसचिव गणेश चालिसे समेत खेलो फड्कोमा संलग्न रहेको बताएको छ ।
पिलो निचोरिएर हाइसञ्चो भयो भन्नेले सदनमा नारा लगाउने ? : माधव नेपाल
एक मुक्काले ढले मेयरसाब
बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा मिल्यो मन्त्रालयको भाग
रकमकै लागि निजी विद्यालय खुलाउने होड, बच्चाको स्वास्थ्य जिम्मेवारी कसको ?
Previous articleजाजरकोटका दर्जन बढी विकास आयोजना किन अलपत्र ?
Next articleराजदेवी नगरपालिकाको भ्रष्टाचारको पोल खुल्दैं
सम्वाददाता - अशोज ४, २०७८ 0
काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेका सांसदहरु संसदमा...
बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई स्थानीयले मुक्का प्रहार गरेका छन्। केही दिनअघि लगातारको वर्षाले चुरेबाट पहिरो...
काठमाडौं । बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिलेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर...
सम्वाददाता - अशोज ३, २०७८ 0
काठमाडौं । विद्यालय खोल्न विद्यालयहरु तम्सिरहेका छन् । तर, अभिभावकहरु भने विद्यालय खोल्न हतारिएको देखिएको छैन । विद्यालयहरु शुल्कको लागि हतारिएको अनुमान...
एक हप्तामा सरकारमा जाने, तर आसेपासेलाई नलाने माधव नेपालको उद्घोष
पोखरा । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरेका माधवकुमार नेपालले पोखरा पुगेर सरकारमा सामेल...
प्रकाशक : हव ब्रोडकास्टिङ्ग प्रालि
सञ्चालक : हिमा पौडेल
सम्पादक : वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी
कार्यालय : अनामनगर, काठमाडौं
समाचारका लागि सम्पर्क : ९८४१९४०६९५
सूचना विभाग दर्ता नं : ११६७-७५/७६
प्रेस काउन्सिल सूचिदर्ता नं २१६१-०७४/०७५